Ihe ndi ozo na-aru anu aru: ndi mmadu na-adi na ndi ogwu dika anu ulo na terrariums
Ugbo oru ugbo bu ubu oru puru iche
Achị na-ebutekarị mmeghachi omume dị iche iche n'ime mmadụ: asọ oyi ma ọ bụ mmasị. Ndị ahụ nwere mmasị na amara nke agwọ nwere ike ghara afọ ojuju mgbe ụmụ anụmanụ na-enweghị ike ịkwaga, ọ bụ nanị site na ịmịpụ akpịrị afọ ha.
Ihe ndi ozo ndi na-aru anu aru: ndi mmadu na-adighi obi uto na ndi ogwu
Ha na-emezi ihe banyere ụdị anụmanụ a.
Snakes na a terrarium
Nchịkọta bụ, ọ bụ ihe doro anya na onye ọ bụla, ọ bụghị nkịtị anu ulo. Ugbua na ihe oriri na-egosi na a ghaghị ide agwọ dị iche iche dị ka ihe atụ hamsters, ọka pigs na dwarf rabbits.
Ndị na-egbu anụ na-erikarị anụ anụmanụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na nri adịghịzi ndụ, dịka ọmụmaatụ, nchịkọta nke chicks ma ọ bụ mkpụrụ ndụ nke ụbọchị ole na ole bụ iwu maka ndị nkịta ụfọdụ. Dị nnọọ iche karịa ka ọ dị na mbụ na anụ ọhịa anụ ụlọ, nke a pụrụ inye n'ụdị pellets ma ọ bụ efere plastik.
Idebe agwọ na-abụkarị ihe siri ike ma dị oke ọnụ karịa àgwà nke ezi azụ. E nwekwara nnukwu ụgwọ dị elu, z. B. site na ọkụ eletriki ọkụ ahụ (ọ ga-abụkwa na ọ ga-ekpo ọkụ ọkụ) na ọnụ nri dị ọnụ ọnụ.
Green agwọ na terrarium
Onye na-elekọta anụ ọhịa na-enye ndị na-azụ anụ ya ụdị ọnọdụ ndụ kachasị mma na terrarium ya.
Ọ dị mkpa na a na-emegharị terrarium nke agwọ ahụ, n'ihi na ọ bụghị agwọ niile nwere mmetụta dị mma n'otu ebe ahụ. Ndị na-ebigbu ala ga-enwe terrariums nwere ụkwụ ukwu, ebe agwọ na-enwe mmetụta nke ọma na mbara igwe ndị na-agbaso elu karịa na obosara.
Maka nchọpụta nke abalị nke agwọ, ọ bụ ihe ezi uche ịnweta oriọna na-acha uhie uhie na ma ọ bụ n'elu terrarium, n'ihi na agwọ nwere ike ghara ịghọta ìhè n'anwụ a na-agba agba, mgbe ahụ ụmụ mmadụ anaghị echegbu onwe ha.
Dị ka onye na-elekọta agwọ agwọ n'ọdịnihu otu ga-achọpụtakwa na terrarium dị mma. Enwere ike inweta ventilash nke ọma site na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ plastic gauze, na-edozi oghere ventilation. Ọnọdụ dị elu nke ventilashion na-atụle ka e si etinye oghere ventilates abụọ. N'akụkụ nke ọzọ na mpaghara ala, n'akụkụ nke ọzọ n'akụkụ elu.
Ọtụtụ umu anumanu na-achọ ebe ezoro ezo iji weghaara oge ezumike. Dabere na ụdị agwọ, ụlọ ndị na-arịgo elu, ebe ọkụ na-ekpo ọkụ na ebe mmiri na-agba mmiri, nke agwọ nwere ike iji mee ihe dị ka ebe ịsa ahụ, na-abanyekwa na ebe kwesịrị ekwesị.
Onye ọ bụla nke chọrọ ịdebe ndị na-adaba na edemede "egbu egbu" na / ma ọ bụ "karịa 3 mita n'ogo" ga-anakwere site na ụlọ ọrụ iwu ọha na eze dị mkpa. Mgbe ị na - emeso agwọ na - egbu egbu, a na - atụ aro ka ịnweta ọgwụ dị irè dị n'ime ụlọ iji nwee ike ịme ihe mgbochi n'oge a na - egbu ya.
Pony dị ka anụ ụlọ | Anu ulo